Ny mamoy, mora… foana | NewsMada
Ny mamoy, mora… foana
Sarotra, hono, ny manantena tsy misy; fa ny mamoy, mora foana. Inona, rey olona, no mbola antenain’ny vahoaka amin’izao toe-draharaham-pirenena izao? Samy manana ny fijeriny ny tsirairay, arakaraka ny toerana misy azy amin’izay kendreny, na tadiaviny, na iadiany, na arovany, na mahamaika azy, na zava-dehibe aminy…
Inona izao ny tsy misy ka mbola hoe sarotra amin’ny vahoaka? Na ny fanatanterahana azy io, na ny fanantenana aminy. Eo, ohatra, ny tsy fandriampahalemana: tsy any ambanivohitra, tsy an-tanàn-dehibe, tsy an-dalam-pirenena… Ny zava-doza, mitarika tsy fahatokisana mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny raharaha.
Tsy mahagaga raha mbola mahazo vahana etsy sy eroa ny fitsaram-bahoaka; indraindray, lasa fihantsiana mpitandro filaminana sy fitsarana mbamin’ny mpiambina fonja aza ny toe-javatra, na fikomiana aza… Tsy misy ny fampiharan-dalàna? Vokany, mitoetra hatrany ny fitakiana ny fanaovana dina any amin’ny faritra sasany.
Santionany ny hoe sarotra ny fandriampahalemana… Eo ny fidangan’ny vidim-piainana, ny harem-pirenena gaboraraka, ny kiantranoantrano mahatompony mangataka atiny ny vahoaka, ny fanjakazakan’ny tsimatimanota, ny tsy fisian’ny fangaraharana, ny kere miverimberina, ny kolikoly, ny kitsapatsapa amin’izay atao rehetra…
Ahoana kosa ny amin’ny hoe mamoy mora foana? Moramora sy mampilamin-tsaina kokoa ny mihevitra zavatra hafa amin’ny famoizana avy hatrany izay fantatra fa tsy ho tanteraka. Zava-doza ny miandry vasoka lava, voarebireby amin’ny tsy antony: fampanantenana, fitaka… Izay ilay hoe manantena tsy misy: sarotra fa tsy moramora.
Tsimoramora, mety ho mora foana koa ny mamoy: manafoana ny famoizana ho toy ny tsy misy. Amin’ny fomba ahoana? Raha tena miasa ny mpitondra, manatanteraka ny hetahetam-bahoaka, mahavita izay (n)ampantenaina… Mby aiza izany amin’izao? Na mora foana amin’ny vahoaka ny hamoy, na manafoana ny famoizam-po ny mpitondra…